Vaovao - fampiroboroboana ny tsenan'ny ski any Shina
Ny Lalao Olaimpika Ririnina tamin'ny 2022 dia nanentana ny fampandrosoana ny ririnina amin'ny ririnina any Shina, miaraka amin'ireo toeram-pisakafoanana amina ski saika isaky ny faritanin'i Sina. Tamin'ny taona 2018 fotsiny, dia 39 ny trano fisakafoanana ski vao nisokatra, miaraka amin'ny totalin'ny 742. Ny ankamaroan'ny toeram-pisakafoanana dia mbola tsy ampy fitaovana miaraka amin'ny karipetra majika iray na vitsivitsy fotsiny, ary ny ankamaroany dia làlana voalohany. 25 ny toeram-pisakafoanana manao ski ambony ihany no manakaiky ny fenitra tandrefana, mazàna tsy manana toeto-ponenana, ary isa voafetra ihany no azo antsoina hoe resort ski marina. Na izany aza, tato anatin'ireo taona faramparany dia nisy fiovana vaovao isan-taona, anisan'izany i Beidahu, cuiyunshan, Fulong, yundingmiyuan, Farihy Wanke Songhua, Taiwu, Wanda Changbai Mountain, Wanlong ary Yabuli. Amin'ny ho avy, ny toerana fialantsasatra sasantsasany izay ampiasaina mandritra ny fizaran-taona dia hiaraha-miasa ihany koa. Misy toeram-pisakafoanana ski 26 ao Shina (ny ankamaroan'izy ireo dia manodidina an'i Beijing sy Shanghai, ary hisy efatra vaovao manomboka amin'ny 2017 ka hatramin'ny 2019) ary zaridaina misy ranomandry 24 100% manodidina an'i Beijing, miaraka amina zato metatra marobe.
Ny isan'ny mpanao ski dia nitombo be hatramin'ny taona 2000. Tamin'ny 2015 dia nahazo ny firenena tompondakan'ny Lalao Olaimpika tamin'ny 2022 i Sina, izay vao mainka nanentana ny hafanam-pon'ny besinimaro hanao ski. Tao anatin'ny vanim-potoanan'ny oram-panala dia nisy fitomboana lehibe. Amin'ny vanim-potoanan'ny oram-panala 2018/19 dia manodidina ny 20 tapitrisa ny isan'ny mpilalao ski, ary ny isan'ny mpizahatany manao ski dia mitombo isan-taona. Tsy ho ela dia ho lasa mpilalao lehibe eo amin'ny sehatry ny ski i Sina.
Ny fanambin'ny tsenan'ny ski Sinoa dia ny fizotran'ny fianarana ski. Ho an'ireo vao manomboka, raha ratsy ny traikefa fanaovana ski voalohany dia ambany dia ambany ny tahan'ny fiverenana. Na izany aza, matetika ny toeram-pialan-tsasatra any Shina dia tena be olona, ​​misy be dia be ny vao manomboka ny fanaraha-maso, ny filalaovana skiing voalohany dia tsy mety. Miorina amin'izany, ny fomba fampianarana skiing amin'ny alpine nentim-paharazana dia natao ho an'ireo mpanao ski izay mijanona ao amin'ny toeram-pialan-tsasatra mandritra ny herinandro, izay tsy voatery ho an'ny fomba fanjifana any Shina ankehitriny. Noho izany, ny laharam-pahamehana ataon'i Shina dia ny fampivelarana ny rafi-pampianarana sahaza ny toe-bolam-pirenenan'i Shina, ny fitrandrahana tsena fanaovana ski ambony goavambe any Shina, fa tsy avelany hiaina ski indray mandeha fotsiny.
Taratasy fotsy momba ny indostrian'ny ski (tatitra isan-taona 2019)
Fizarana ski sy fitsangantsanganana fizarana voalohany
Ny toerana fanaovana ski sy mpanao ski dia ny andry roa amin'ny indostrian'ny ski rehetra, ary voahodidin'ny orinasa sy ny hetsika rehetra amin'ny sehatry ny ski.
Manodidina ny bao. Noho izany, ny isan'ny toeram-pilalaovana ski sy ny isan'ny mpanao ski no ivon'ny indostrian'ny ski
Famantarana. Araka ny zava-misy marina any Shina, dia mizara ny toerana fanaovana ski amin'ny ski resort izahay (ao anatin'izany ny resort ski any ivelany sy ny resort ski)
Fialan-tsasatra an-trano, tehezan-tany maina ary gym fanaovana spaoro simulate.
1, Isan'ny toeram-pialan-tsasatra, mpanao ski ary mpanao ski
Amin'ny taona 2019, dia hisy 28 ny toeram-pisakafoanana ski vaovao any Shina, ao anatin'izany ny trano fandraisam-bahiny 5 ao anaty trano, 770 ny fitambarany
Ny tahan'ny fitomboana dia 3,77%. Anisan'ireo toeram-pialan-tsasatra 28 vao nampiana, 5 no efa nanamboatra lalan-by, ary iray hafa no nisokatra
Làlan-drivotra vaovao. Tamin'ny faran'ny taona 2019, amin'ireo toeram-piompiana lanezy 770 any Chine, dia nahatratra 100% ny isan'ireo toeram-pialan-tsasatra misy ropeways aerial
155, fiakarana 4,03% raha ampitahaina amin'ny 149 tamin'ny taona 2018. Ny isan'ny mpanao ski ao amin'ny trano fisakafoanana an-toerana dia nitombo nanomboka ny taona 2018
Avy amin'ny 19,7 tapitrisa tamin'ny 2013 ka hatramin'ny 20,9 tapitrisa tamin'ny 2019, fitomboana 6,09% isan-taona.
Ny fironana amin'ny isan'ny toeram-pialan-tsasatra sy ny isan'ny mpanao ski dia aseho amin'ny sary 1-1.
Sary 1-1: Antontan'isa momba ny toeram-pialan-tsasatra sy mpanao ski ao Shina
Amin'ny fahatongavan'i Beijing fotoana amin'ny Lalao Olaimpika amin'ny ririnina, ny hetsika fampiroboroboana ny ski rehetra dia mivoatra amin'ny làlan'ny fanamafisana
Nihatsara ny tahan'ny fiovam-po. Raha ny fanisana ity tatitra ity dia 13.05 tapitrisa eo ho eo ny mpanao ski an-trano amin'ny 2019,
Raha ampitahaina amin'ny 13,2 tapitrisa amin'ny 2018 dia somary ambany kokoa izy io. Anisan'ireny, ny tahan'ny mpanao ski izay manana traikefa indray mandeha dia nitombo hatramin'ny 30% tamin'ny 2018
38% hatramin'ny 72. 04%, ary nitombo ny tahan'ny mpanao ski. Skides any Shina amin'ny taona 2019
Ny isan'ny skiing per capita dia nitombo tamin'ny 1,49 tamin'ny 2018 ka hatramin'ny 1,60.
Sary 1-2: dia fitsangatsangana an-tsambo sy mpanao ski